JIS B2220 10K OD5CS Foundation မျက်မမြင်အနားကွပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ - Aiguo
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အနားကွပ် > မျက်စိကန်းသောအနားကွပ် > JIS B2220 10K OD5CS Foundation မျက်မမြင်အနားကွပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် JIS B2220 10K od5cs Foundation Blind အနားကွပ်ကိုပေးသည်။ AG သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဓိကသော့ချက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာတန်ချိန် ၉၀၀၀ ကျော်ခဲ့သည်။ ၂၅ နှစ်ကြာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပြည်ပ - အရောင်းအတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်နှင့်အတူတင်ပို့သူ။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် JIS B2220 10K od5cs Foundation Blind flange
ကျွန်ုပ်တို့သည် Flat Flange၊ Blind Flange, Weld Neck အနားကွပ်၊ Loose အနားကွပ်၊ Thread အနားကွပ်၊ Slip-on အနားကွပ်နှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကစံနှုန်းများမှာ JIS2220, BS Table-D 6â€™, DIN, EN1902-1, GOST , UNI6092, AS2129, SANS1123, etc ။
JIS B2220 10K od5cs ဖောင်ဒေးရှင်းကမျက်စိကန်းသောအနားကွပ်၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
မျက်စိကန်းသောအနားကွပ် DN15-DN2000, ကာဗွန်သံမဏိအတုနှင့်စံမဟုတ်သောအမိန့်များ။
J ကို B ကို 2220
3. JIS B2220 10K od5cs Foundation မျက်မမြင်အနားကွပ်၏ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်အသုံးပြုမှု
မျက်စိကန်းသောအနားကွပ်၊ ၎င်းသည်ပိုက် plug ကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်အလယ်၌အပေါက်မရှိသောအနားကွပ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဂဟေ ဦး ခေါင်းနှင့်ဝက်အူနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်မျက်စိကန်းသောအနားကွပ်နှင့်အဖုံး ဦး ထုပ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖယ်ရှား။ ဂဟေဆော်ခြင်း ဦး ခေါင်းမဟုတ်ပါ။ အပြည့်အဝလေယာဉ်၊ အပြာရောင်မျက်နှာပြင်၊ ခွက်မျက်နှာပြင်၊ tenon မျက်နှာပြင်နှင့်လက်စွပ်ချိတ်ဆက်မှုမျက်နှာပြင်များအပါအဝင်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမျက်နှာပြင်များစွာရှိသည်။
4. ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ JIS B2220 10K od5cs Foundation Blind flange
အချင်း: 1/2 "မှ 48"
စံ:ASME B16.5, JIS, DIN,EN1092-1,AS 2129,GOST12821-80
မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်း။ ။ သံချေးဆီ၊ အဝါရောင် / အနက်ရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း၊
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန် - ၃၅ ရက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်
ကောင်းကျိုးများ - အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်း၊ အချိန်မီတွင်လွယ်ကူစွာငွေပေးချေနိုင်သည်
၅။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး JIS B2220 10K od5cs Foundation Blind အနားကွပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောစစ်ဆေးခြင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုယုံကြည်ပါ။
6. JIS B2220 ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း 10K od5cs Foundation မျက်စိကန်းသောအနားကွပ်
JIS B2220 10K od5cs blind flanges အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သစ်သားသေတ္တာနှင့်ပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားထုပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရထုပ်ပိုးခြင်းပုံစံကိုလဲပြောင်းလဲသည်။
AG PLANT ကဘယ်အချိန်မှာတည်ထောင်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ ၁၉၉၂ မှာ။
မေး။ AG မှာအလုပ်သမားဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။
ဖြေ။ စက်ရုံတိုးချဲ့လာတာနဲ့အမျှစက်ရုံတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအလုပ်သမားအရေအတွက်ကတိုးလာနေတယ်။ အခု ၂၀၀ ကျော်ပြီ။
ဖြေ။ ။ အခမဲ့နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်စရိတ်ကိုသင်လိုအပ်သည်။
A: ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံကိုသင်၏တောင်းဆိုချက်အရကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိူင်သည်။ သို့သော်သင်ဤကာလအတွင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ပြန့်ပွားမှုအတွက်သင်ကုန်ကျရမည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းတို့ပုံဆွဲလို့ရတယ်၊ မင်းတို့တံဆိပ်လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမင်းပိုင်မှာပေါ့
A: ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ပေးမယ့်သင့်ပုံဆွဲအတိုင်းထုတ်ကုန်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
hot Tags:: JIS B2220 10K OD5CS Foundation မျက်စိကန်းသောအနားကွပ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံများ၊ သိုလှောင်ထားသောအခမဲ့နမူနာများ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည့်တရုတ်၊
UNI6092 P245GH4CS မျက်မမြင်အနားကွပ်အရွယ်အစား